Lapho ekhetha upende imibala izinwele kubalulekile acabangele izici eziningi, ngokwesibonelo, umbala wamehlo futhi isikhumba tone. Kahle akhethiwe umbala noma tint akugcini nje ukugcizelela ubuhle amehlo, kodwa uyobenza bazwakale. Indlela ukukhetha umthunzi kwesokudla? Ngubani, isibonelo, ngeke asondele golden-bomvu, usika izingcezu azidingayo ngokucophelela, futhi ubani - nje umbala "nut"?
Yiqiniso, abanikazi brown amehlo. Kuyinto efanelekile brown uneso elilodwa futhi segolide ithoni ensundu ngokuphaphathekile, esinsundu noma ithusi shades. Girls, Darkie, ibala lesikhumba okuyinto efana kahle kuchazwa tan ukuncoma imibala emnyama - chocolate efudumele noma konsundu. Kodwa akusho ukuthi ukhethe elilodwa-umbala version kuphela. Izinwele umbala "nut" iyoba ikhange nakakhulu futhi kube bheka ngokucace nakakhulu ukuthi uma sizenzela avelele noma umbala ne ngokubomvu noma ukukhanya umbala uju-caramel.
intombazane Brown uneso nge isikhumba eyanelisako angasebenzisa upende noma ukuxegiselwa shades of ngokubomvu amathoni. Uma ungawasebenzisi upende i-ammonia, ubisi-chocolate izinwele, ukukhanya esinsundu noma umbala caramel uyobheka emangalisayo.
"Walnut" - umbala eyinqaba kakhulu. Ngokwesibonelo, "chocolate brownies" aqabule kahle ebusweni. Main kuphela izinwele ezidayiwe ukuze ube nempilo futhi bheka zemvelo.
Kaningi, izinwele wentombazane siqu has umbala "nut" nokukhanya onsundu ngokuphaphathekile noma abe umbala zethusi. Ukwenza kube ngokucace nakakhulu futhi bayaxoxa, kubalulekile ukuba sisebenzise Umbala emnene. Vele kancane ukuba sijulise umbala ngokubamba upende isikhathi esincane eyabelwe.
Umbala "nut" wezwakalisa kancane violet uyahamba nobuso intombazane isikhumba omnqumo. Kukhona ngisho ukudlala indima umbala amehlo: brown uneso ukuze libe ngumthunzi uyobheka zemvelo kakhulu, futhi okwesibhakabhaka uneso - kancane ethakazelisayo.
Abanikazi ngemabula esikwazi ukukhulisa isikhumba okwesibhakabhaka kungaba ukudaya ngokuphepha izinwele zakho shades of shokolethe. Uma ukwenza "kabili ungqimba" color: umqhele - kuba mnyama, futhi ekupheleni - the lula, izinwele enjalo likhanga kakhulu. Ngaphezu kwalokho, inhlanganisela imibala abanesibindi ukuphazamisa amehlo kusukela imibimbi nokungapheleli ebusweni.
Ephambi kwezinduna ishiya ukukhanya ungakhetha umthunzi efudumele-uju nut, ngoba amehlo amnyama - umbala cool "nut" ekhanya grey luhlaza. By the way, uthole nje ithoni enjalo, ungakwazi ukwengeza kuya base upende impela kancane amnyama zehena oluhlaza.
amehlo Brown, futhi, ngoba kukhona ezihlukile kusukela ukuxegiselwa ukuze ayegcwele. Lokhu isici kubalulekile izinwele Umbala. Amehlo umbala isihlabathi kungenziwa "elahlekile" ngemuva kuxhopha kakhulu noma izinwele ezimnyama. Ngakho-ke, kulesi simo, intombazane kungcono ukukhetha upende nge ngokubomvu, caramel, segolide noma inhlaka tint.
Kodwa amehlo egqamile brown iphelele amathoni ocebile amnyama. Uma amantombazane isikhumba kuyilapho ukuphaphatheka, umehluko phakathi kwamehlo egqamile futhi isikhumba eyanelisako ubukeka ethakazelisayo futhi esimnandi kuleli ukubhuqa izinwele elihlale imibala.
Ngakho, sibonga anhlobonhlobo imibala ukupenda "nut" nge efudumele, umlotha noma anemibala segolide iyithuluzi isebenziseka ngezindlela eziningi, eqokomisa ubuhle noma iyiphi intombazane. Kuphela kufanele kuphawulwe ukuthi kakhulu uguqule ukubukeka kwayo ayifezi lutho. Kuyadingeka ukuba ukhethe imibala Uyi shades ezimbalwa ezahlukahlukene kusukela yemvelo izinwele umbala.
Kanjani izinwele discolor ngenhla udebe: izindlela friendly ukuqeda izinwele ezimnyama
Air-umthombo ukushisa amaphampu: incazelo, isimiso wokusebenza. Ukushisa futha air endlini ngezandla zakhe (ukubuyekezwa)
Heat isibhamu ngoba egalaji: ukukhetha idivayisi ezifanele
Kettle e ZaseCarpathos: iresiphi ngesithombe